Masuuliyiin laga soo saaray xarunta maxkamada gobolka Banaadir iyo xaalada goobtaas oo weli cakiran – idalenews.com
Masuuliyin ka tirsan dowlada Somalia iyo dad kale oo fara badan ayaa laga soo saaray goor dhow xarunta maxkamada gobolka Banaadir oo maanta ay ka dhaceen dagaalo iyo qaraxyo ismiidaamin ah oo halkaas ay kula wareegeen kooxo hubeysan oo weerar ku soo qaaday.
Masuuliyinta laga soo saaaray xaaruntaas ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamada sare Caydiid Ilkaxanaf, gudoomiyaha maxkamada gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur xeer iyo qaar ka mid ah dadweyne ku go’doonsanaa xaruntaas.
Ciidamo ka tirsan nabad sugida qaranka oo si gaar ah loo tababaray iyo kooxihii hubeysnaa ayaa ku dagaalamaya xarunta maxkamada gudaheeda oo la sheegayo in weli ay dad badan go’doon ku yihiin.
Qarax kale oo afaraaad ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay gudaha xaruntaas kaasoo aan la ogeyn waxaa uu yahay iyadoo rasaas xoogan ay weli dhaceyso, waxaana guud ahaan lagu soo daadiyey nawaaxiga xaruntaas ciidamo boqolaal gaaraya.
Weriyeyaal goobta booqday ayaa xaqiijiyey iney arkeen meudka labaatan qof oo weerarkaas ku dhintay, waxaana ka mid ahaa weriye lagu magacaabi jiray Xabeeb oo ka howlgala warbaahinta Muqdisho qaarkood, sidoo kale waxaa la xaqiijiyey inuu geeriyooday qareenkii u doodayey weriye C/casiis koronto oo dhowaan dacwad ay ku soo oogtay dowlada.
Xaalada magaalada Muqdisho guud ahaan cakiran, waxaa meel walba lagu soo daadiyey ciidamo badan, xarumaha dowlada amaankooda ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo laga baqayo iney dhacaan mowjado kale oo weeraro ah, waxaana yaraaday gaadiidka wadooyika socday iyo dadweynaha.
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaalkii Xamar Weyne iyo Amisom oo gurmad sameeyey